Taliyaha Boliiska oo la hadlay Arday ku soo biirtay Ciidamada Booliska , Daawo Sawirada | SPF: Welcome to the Somali Police
Taliyaha Boliiska oo la hadlay Arday ku soo biirtay Ciidamada Booliska , Daawo Sawirada	Added by admin on 12 June 2015.Saved under SAWIRADDA, WARARKA	Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed Sareeyo guuto Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa maanta kula kulmay akadeemuyada boliiska ee Gen kaahiye Ardaydii 10-kii bisha imtixaanka ku biirista ciidanka boliiska u fadhiistay kuwass oo maanta loogu dhawaaqayay natiijadii imtixanka.
Ugu horayntii taliyaha ayaa soo dhoweeyay ardayda una sheegay in ciidanka uu u baahan yahay dhalinyaro cusub oo berito noqota madaxdii dalkan hoggamin lahayd.
Wuxu kula dardarmay in ay ku qancaan natiijada Imtixaanda intii la xushana ay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed oo ciidanka ku biirtay inta kalana aan kaga maarmi doonin balse loo qaadan doono tababarona dalka gudihiisa lagu siin doono.
sidoo kale waxaa ardayda la hadlay safiirka somaliya ee dalka sacuudiga Amb Dahir Maxamud Geele o la dardaarmay ardayda una sheegay in uu dalku u baahan yahay dhalinyaro iyaga oo kale ah aqoon leh diyaarna u ah in ay dalka badbaadiyaan soona celiyaan sharaftiisa.
Dhinaca kale Imtixaankii labaad ayaa maanta laga qaaday arday ka kala timid gobolada gaar ahaan Baay iyo Gedo maadaama ka soo dib dhaceen imtixaanki hore. Waana imtixaanka xulashada layli saraakiisha loo qaadanayo ciidanka boliiska